धर्ती मातालाइ राती राती भेट्न आउने को हो ? डरलाग्दो खुलाशा गरिन – Complete Nepali News Portal
धर्ती मातालाइ राती राती भेट्न आउने को हो ? डरलाग्दो खुलाशा गरिन
काठमाडौँ | बुटबल घर भएकी विष्णु कुँवर अर्थात् धर्ती माता पहिले कलाकार थिइन्। उनी कलाकारितामा जम्न नसकेपछि माता बनेर युट्युवमा पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेकी थिइन्। पछिल्लो काण्डबाट उनी अहिले फेसबुकतिर पनि चर्चामा छिन्। रेसुङ्गामा तीन महिना कठिन तपस्या गरेपछि ज्ञान पाएँ। अहिले सफल भएकी छु। दिनमा मलाई भेट्न आउने भक्तजनको संख्या गनेर साध्य छैन।’ धर्ती माताले भनिन्।
गुल्मीको ईस्मा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष टीका रेश्मी उनको जन्म घर सोही वडा साविक हस्तीचौर गाविस–८ मा रहेको पालुखाको पनाह टोल रहेको बताउँछन् । उनकी आमाको मृत्यु भइसकेको छ । उनले बाबुको नाम सञ्चार माध्यममा गोप्य राख्दै आएकी छन् । उनीहरुको परिवार बसाइसराइ गरेर रुपन्देहीतिर गएको ८–९ वर्ष भएको उनका दाजु पर्ने पनाहका बलभद्र कुँवरले जानकारी दिएका छन् ।